2000 Group ( B –6) မှတ်စု (၃၅) by May Aye Oo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » 2000 Group ( B –6) မှတ်စု (၃၅) by May Aye Oo
2000 Group ( B –6) မှတ်စု (၃၅) by May Aye Oo
Posted by Swal Taw Ywet on Apr 6, 2012 in Community & Society, Events/Fundraise |7comments
မှတ်စု (၃၅) by May Aye Oo on Monday, March 19, 2012 at 9:15am ·
“စိတ်ညစ်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ အိုရမယ်ဆိုတာ သိလို့ရှိရင် မအိုခင် တို့တွေ ဘာလုပ်မလဲ…၊
ဟော.. ပြင်ဖို့ ဆင်ဖို့ အချိန်တွေမရဘူးလား၊
ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ အချိန်တွေရလာတယ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ များများ ကြိုးစားလုပ်လာတယ်။”
“အိုမယ်ဆိုတာ သိတယ်၊ နာမယ်ဆိုတာ သိတယ်၊ သေမယ်ဆိုတာ သိတယ်၊
မအိုခင်၊ မနာခင်၊ မသေခင်၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ များများလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဒီအသိဝင်ဖို့အတွက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားရတာ၊
အဲ့ဒါဟာ တရားရဲ့ ကျေးဇူးပဲ၊ ဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်သဖြင့် အိုမယ်ဆိုတာ သိနေသည့်အတွက်ကြောင့် အိုလာတဲ့အခါ အော် ငါစဉ်းစားထားတာ၊
အိုတယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝပဲ၊ ဟော စိတ်ညစ်စရာရှိသေးလား။
ဒီသဘာဝတရားကို ဘယ်သူ့မှ မကျော်လွှားနိုင်ဘူး။
အားလုံးဟာ ရင်ဆိုင်ကြရမှာဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ဆိုတော့ အန္တရာယ်ကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလား။”
ဒီတစ်ပါတ် ခရီးစဉ်ကတော့ စင်္ကာပူက အလှူရှင်တစ်ဦးကို ကျောက်ကွင်းကျေးရွာကို လိုက်ပြတာပါ..။ ကျောက်ကွင်းကျေးရွာက မူလွန် ကျောင်း လေး ကို အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်ဖို့ မှန်းထားတာကြောင့်ရော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေရဲ့ အားထားရာဖြစ်လာပြီး ကျောင်းသားဦးရေ တိုးလာမှာတွေရေကြောင့်၊ အနဲဆုံးတော့ တန်းခွဲတစ်ခုတိုးမှာ သေချာတာမို့ ကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ခု လိုအပ်နေပါတယ်..။ စင်္ကာပူက ဥတ္တရအလင်းက ညီမလေး “နီ” ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ ကျောင်းဆောင်လှူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလှူရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်မိပြီး..၊ သူတို့မေးတဲ့ မေးခွန်းများကို email နဲ့ ဖြေအပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်.. ဆိုလို့ ကျောက်ကွင်းရွာကို လိုက်ပြတာပါ..။
ကျမက အလှူရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လိုက်ချင်ကြတယ်.. ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့.. ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့သွားတဲ့အခါ လိုအပ်မှန်း တစ်ကယ်သိသွားတာမို့ ပိုပြီး သဒ္ဓါပေါက်တတ်ကြလို့ပါ..။
ထုံးစံအတိုင်း ဒီခရီးစဉ်မှာ နလန်တောင်ရွာ မှာ ကျောင်းဆောက်လှူနေတဲ့ ကိစ္စ၊ ပြည် -နည်းပညာကျောင်းက ကလေးတစ်ယောက်ကို ပညာရေးကူညီဖို့ကိစ္စ၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် အနောက်ကြို့ကုန်းရွာက ကျမတို့ ၂၀၀ဝအဖွဲ့ရဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း သူတို့ရွာမှာ ဖွင့်ပေးစေချင်လို့ ကျမနဲ့တွေ့ဖို့ ကျောက်ကွင်းရွာကို လာစောင့်နေကြပါတယ်..။
၁၇-၃-၁၂ နေ့ မနက် ၄ နာရီ အိမ်ကထွက်ပြီး အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ကိုသွားကြပါတယ်..။ မနက် ၅ နာရီ အာရှ ကားနဲ့ ပြည်ကိုစီးရပါတယ်..။ ပြည်ကို နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၁၅ လောက်မှာရောက်ပါတယ်..။ ပြည်ရောက်တာနဲ့ အဝေးပြေးကားပေါ်ကဆင်းပြီး၊ ကြိုတင်ငှားထားတဲ့ ကားပေါ်ပြောင်းတက်ကြပါတယ်..။ ပြည်ကနေ.. ဝက်ထီးကန်၊ အဲဒီကမှ ကျောက်ကွင်းရွာကို ခရီးဆက်ကြပါတယ်..။
အညာနွေနေ့လယ်ခင်းရဲ့ နေက ကျဲကျဲတောက်ပူပါတယ်..။ ပြည်ကနေ ကျောက်ကွင်းရွာ လမ်းတလျှောက်မှာ အပင်ကြီးတွေ မရှိတာမို့ နေကလဲပူ၊ ဖုံကလဲ အတော် ထူပါတယ်..။ကျောက်ကွင်းရွာကို နေ့လယ် ၂ နာရီကျော်လောက် ရောက်ကြပါတယ်..။ အဲဒီတော့မှ နေ့လယ်စာ စားကြတာပေါ့..။ စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ကျမက “အော်.. ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေက ပတ္တမြားထိပ်တင် ထမင်းစားပါ.. လို့ ဆိုခဲ့ သကိုး..” ဆိုတော့ ၊ ကျမသားကြီး လင်းထက်ဦးက.. “မေမေရေ.. ပတ္တမြားက ငယ်ထိပ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး.. နားထင်ကိုရောက်နေပြီ..” လို့ .. ပြောပါတယ်..။ ဘာဘဲပြောပြောလေ.. ဆာကလဲဆာ၊ လက်ရာကလဲကောင်းသမို့ စားကောင်းကြတာတော့.. တစ်ကယ်ပါ..။
ကျမကိုတွေ့ဘို့ဆိုပြီး ဧည့်သည်တွေက ကြိုရောက်နေကြတာမို့ ထမင်းကို မြန်မြန်စားပြီး.. စကားပြောရပါတယ်..။ ပြည်-နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က ကလေးမလေးကို ပညာရေးကူညီမှုပေးပြီး၊ ဆုံးမစကားလေးပြောပေးပါတယ်..။ ကျောက်ကွင်းဆရာတော်နဲ့ နောက်ပိုင်း ဆက်သွယ်ပြီး လစဉ်ငွေ ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေလဲ စီစဉ်ပြီး ကလေးမလေးကို ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်..။
ပြီးတော့ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် အနောက်ကြို့ကုန်းရွာက ဆရာမလေးတွေနဲ့ ဆက်ပြီး စကားပြောရပါတယ်..။ သူတို့ရွာမှာ ကျမတို့နဲ့ ယဉ်ကျေး လိမ္မာ သင်တန်းဖွင့်ချင်လို့ လာပြောတာပါ..။ ကျမလဲ ဒီနွေမှာ တစ်နွေလုံး ရက်အား မရှိသလောက်ပါဘဲ။ schedule တွေကပြည့်နေပါပြီ..။ ဒါပေမဲ့ .. အင်း .. ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်.. ဆိုတော့ ပြည်ကတစ်ဆင့်သွားရမှာဆိုတော့ လမ်းခရီးက အချိန်တော့ သိပ်မစားဘူး..။ ကျမတို့တော့ ပင်ပန်းမယ်..။ အိပ်ရေးပျက်မယ်..။ ခွင့်တစ်ရက်လောက်ယူပြီး.. သောကြာည ရုံးအဆင်းမှာ ရန်ကုန်ကထွက် – စနေနေ့မနက် ဟိုရောက်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ (၃)ရက် သင်တန်းဖွင့်၊ တနင်္လာညကားနဲ့ ပြန်၊ အင်္ဂါနေ့မနက်စောစော ရန်ကုန်ရောက်ရင် ရုံးသွားတက်လို့ရတယ်..လေ..။ ဒါကြောင့် မေလ ထဲမှာတော့ ရက်ပေးနိုင် ပါတယ်.. လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်..။ သူတို့လဲပျော်ပြီး ပြန်သွားကြလေရဲ့..။ ကျမကတော့.. ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်.. အင်းနောက်တစ်ပါတ် – မြိတ်ခရီးစဉ်၊ ပြီးတော့ ထုံဘို-မြောင်ရင်း၊ ပြီးရင် ရေဦး၊ နဲ့ လှည်းချောင်းကူး (အရာတော်) ဆက်ပြီးတော့ လယ်ဘဲ့၊ တစ်ခါ အနောက်ကြို့ကုန်း..၊ ပြီးတော့ .. ချင်းပြည်နယ်..။
ကလေးတွေအတွက် good morning ပေါင်မုန့်၊ lollipop၊ ခဲတံ၊ ပေတံ၊ ပူဖောင်း နဲ့ အအေးတွေ
ပြီးတော့ ကျမတို့လာမယ်.. ဆိုတိုင်းမှာ.. မျှော်နေတတ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် good morning ပေါင်မုန့်၊ lollipop၊ ခဲတံ၊ ပေတံ၊ ပူဖောင်း နဲ့ အအေးတွေ ကလေးတွေကို ဝေပေး၊ တိုက်ကျွေးပါတယ်..။ ကလေးတွေပျော်ကြတာကြည့်ပြီး.. အလှူရှင်တွေကို သတိတရ.. ရှိမိပါတယ်..။ အလှူရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီး တွေ့ကြရင်.. ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပျော်ကြမှာ၊ ပိုလှူချင်ကြမှာ သေချာပါတယ်..။ တရားစခန်းပွဲရှိနေလို့ ယောဂီတွေကိုလဲ မုန့်နဲ့အအေး တိုက်လိုက်ပါသေးတယ်..။
တရားစခန်းပွဲရှိနေလို့ ယောဂီတွေကိုလဲ မုန့်နဲ့အအေး
ပြီးတော့ ကျောင်းပေါ်ပြန်တက်ပြီး၊ ဆရာတော့်အတွက် လူကြုံပါးလိုက်တဲ့ အလှူတွေ ဆရာတော့်ကို တစ်ခုချင်းရှင်းပြပြီး အလှူရှင်များကိုယ်စား လှူပေးပါတယ်..။ ဆရာတော်ကလဲ.. အလှူရှင်တွေကို .. ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ..၊ အစစရောရောအဆင်ပြေကြပါစေ…” . လို့တစ်ဦးချင်း ဆုတွေပေးပြီး အလှူတွေကို လက်ခံပေးပါတယ်..။ ပြီးတော့ ကျောက်ကွင်းရွာဆေးခန်းအတွက် ဆေးဘီဒို အလှူ၊ စာကြည့်တိုက်အတွက်.. စာအုပ်ဘီဒိုနဲ့ စာအုပ်စင်အလှူ.. စတာတွေကို ကျမက ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေယူပါတယ်..။
ဆရာတော့်အတွက် လူကြုံပါးလိုက်တဲ့ အလှူတွေ
နလန်တောင်စာသင်ကျောင်း အတွက် ဘီဒို၊ ဆရာစားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ တွေက ကျောက်ကွင်းမှာဘဲ လက်သမားခေါ်ပြီးလုပ်တာမို့ ပြီးနေပါပြီ။ အဲဒါကိုလဲ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ယူပါတယ်..။တိုင်ကပ်နာရီ (၄)လုံး (ကျောက်ကွင်းဘုန်းကြီးကျောင်း-၁၊ စာကြည့်တိုက်-၁၊ ကျောက်ကွင်းရွာ စာသင်ကျောင်း-၁၊ နဲ့ နလန်တောင်ရွာ စာသင်ကျောင်းအတွက် ၁၊ စုစုပေါင်း ၄ လုံး) ကိုလဲ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နှံကိုယ်စား.. လှူခဲ့ပါတယ်..။
ပါလာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုလဲ စာကြည့်တိုက်နဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆေးခန်းလေးကို လိုက်လဲပြ၊ ရှင်းလဲပြပေးခဲ့ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ရွာထဲကို သွားကြပြီး.. ဧည့်သည် အလှူရှင် လှူမယ့် စာသင်ကျောင်းကလေးကို သွားကြည့်ကြပါတယ်..။ စာသင်ကျောင်းက အပြန် ရွာထိပ်အထိ လမ်းဆက်လျှောက်ကြတော့.. နေဝင်ဆည်းဆာ အလှ နဲ့ ကျေးရွာသူလေးတွေ လယ်ကွင်းလဲမှာ ပျိုးနုတ်နေတာကိုမြင်ရတော့.. ရိုးသားတဲ့ အလှနဲ့ မြတ်နိုးစရာသဘာဝလေးတွေကို ခံစားမိပြီး ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိပါတယ်..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ ၅ နာရီကျော်နေပါပြီ..၊ ကမန်းကတန်းရေချိုးကြ၊ ညစာစားကြပြီး ညနေ ရ နာရီမှာ ကျောက်ကွင်းရွာကနေ ပြန်ထွက်ခွာကြပါတယ်..။ လမ်းမှာ မှောင်လာတော့ အေးလာပါတယ်..။ ပြည်ကို ည ၈ နာရီခွဲကျော်လောက်ရောက်ပါတယ်..။ ရောက်တုံး ရောက်ခိုက်မို့ နိုင်ငံခြားက ဧည့်သည်ကို ပြည်-ရွှေဆံတော်ဘုရားကို လိုက်ပို့ပါတယ်..။ ဘုရားပေါ်ကနေ တစ်ဘက်က ဆယ်ထပ်ကြီးဘုရားကို ကြည်ညိုစရာ.. ဖူးကြရပါတယ်..။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ မြတ်နိုးစရာ.. “ဧရာဝတီ” မြစ်ကို ပြချင်တာကြောင့်၊ မြစ်ကမ်းနားကို သွားကြပါသေးတယ်..။ ဧရာဝတီရဲ့ ည အလှကလဲ ရှုမောစရာပါ..။ ကောင်းကင်ပါ်က ကြယ်တွေကလဲ.. တစ်လက်လက်တောက်လို့…။
ပြည် အဝေးပြေးဂိတ်ကိုရောက်တော့ ည ၉ နာရီ ခွဲလုပါပြီ..။ အတော်ပါဘဲ..။ ကျမတို့က ည ၁ဝ နာရီကားလက်မှတ်ဝယ်ထားတာပါ..။ ကားပေါ်ကျမှဘဲ နားကြရတော့မှာလေ..။ ကားကလဲ မနက်က ကျမတို့ စီးလာတဲ့ကားပါ..။ ကားသမားတွေက ကျမတို့ကို မှတ်မိကြပါတယ်..။ ကျောက်ကွင်းရွာလေးကို ဗဟိုပြုပြီး ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း၊ ပဲခူးရိုးမ အစပ်က ရွာကလေးတွေကို ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး..၊ စသဖြင့် တတ်နိုင်သလောက်လေးတွေ.. ကူညီပေးနေတာမို့ ပြည်ကားကို ခဏခဏ စီးရပါတယ်..။ ရန်ကုန်မှာတော့ .. ကားဂိတ်ကို လက်မှတ် booking တင်ရင်.. ဒေါ်မေအေးဦး လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သိနေကြပါပြီ..။
အခုလို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြတဲ့ စေတနာရှင် အလှူရှင်များ အားလုံး..။ ငွေအား နဲ့ မတတ်နိုင်ရင်တောင် စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် ၎င်း၊ လုပ်အားဖြင့် ၎င်း၊ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးကနေ.. ဖြည့်ပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများ..၊ သားသမီးများ အားလုံး.. စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေ..။ ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ..။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာပါ..။
Dear MG Villagers and readers of MG,
Please try to support our poor people especially on Rural area.
They need your helps.
အလှူရှင်များနဲ့ အလှူခံယူသူများ ကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းပေးပါသော
မမေအေးဦးလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်…
Happy Birthday!!!!!!!!!!!!!!!! 7th April
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ စွယ်တော်ရွက်ရေ။
ကမာ္ဘကြီး ကျန်းမာသလို စွယ်တော်ရွက်လည်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
မေအေးဦးနဲ့ 2000 gp ကတော့ ထုံးဘိုမှာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းသွားပေးနေပါတယ်။
သင်္ကြန်ရက်မှာ ရေဦး ခရီးစဉ်ရှိပါတယ်။
Best wishes for an awesome day filled with love and laughter.
May you truly have the happy ever after.
A Very Happy Birthday !!! :-)
Dear Ah Yee Latt,
Thanks you so much for your Birthday wishes.
Hoping to meet my elder sisters when arrive back home land.
Please share my loving kindness to your family and our MG villagers.
မွေးနေ့လား တရက်နောက်ကျနေပေမဲ့ ဒီနေ့မှ ဖတ်မိလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်
“ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေ။
စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး လိုတိုင်းတ ရနိုင်ပါစေ။
အများအကျိုးကိုလည်း ဒီထက်မက သယ်ပိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ”
Please share my loving kindness to your family and Teacher TTNU.
I hope to meet our MG villagers from Mandalay when I arrive back
to my native town.